४५ छात्राले दिए यौन दुर्व्यवहार आरोपमा शिक्षकविरुद्ध उजुरी – Everest Dainik – News from Nepal
४५ छात्राले दिए यौन दुर्व्यवहार आरोपमा शिक्षकविरुद्ध उजुरी
२०७६, ६ फाल्गुन मंगलवार
काठमाडौंः ललितपुरको चांपाथलीस्थित नारायण आधारभूत विद्यालयका छात्राहरुले १ फागुनमा प्रधानाध्यापक सविता सिलवाललाई ‘केटीहरुमाथि अन्याय भएकोले छानविन गर्न’ हस्तलिखित सामुहिक उजुरी दिए। ३, ४ र ५ कक्षामा पढ्ने छात्राहरुले दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘श्रीमान् प्रिन्सिपल, हामी केटीहरुमाथि अन्याय अत्याचार भएको छ।
केटीहरुलाई ढाडमा सुम्सुम्याउने, छात्तितिर छुन आउने, विभिन्न अंगमा छुन आउने, नचाहिँदो व्यवहार गर्ने। हामी यस्तो समस्यामा परेका छौँ। हामी यस्तो अत्याचार सहन सक्दैनौँ। नन्द सरले हामीलाई नराम्रो व्यवहार गरेकाले तपाईंहरुले छानविन गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ।’
आरोपित शिक्षक नन्दप्रसाद निरौला उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म सामाजिक विषय पढाउँछन् । छात्राहरुको उजुरीपछि आरोपित शिक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्यो। गत आइतबारसम्म पीडित पक्षको जाहेरी नपरेको भन्दै हाजिरी जमानीमा प्रहरीले निरौलालाई छाड्यो।
सोमबार हाजिरी जमानीमा आएका आरोपित शिक्षकलाई पुनः प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। उजुरीको अघिल्लो पृष्ठमा १९ जनाले र पछिल्लो पृष्ठमा २६ छात्राले हस्ताक्षर गरेका छन्। छात्रा सबै १३ वर्ष मुनीका छन्। यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
ट्याग्स: छात्रा, नारायण आधारभूत विद्यालय, यौन दुर्व्यवहार, ललितपुर चांपाथली
गलैँचा र गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का !
अमेरिकामा एकैदिन १३ सय बढीको मृत्यु, ट्रम्प भन्छन्, ‘मास्क लगाउनु पर्दैछ’
एसईई कहिले ? यस्तो छ मन्त्रालयको जवाफ